Macluumaadka farsamo | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Informationsverige.se - Ku hagaha bulshada Iswiidhan / Ku saabsan boggan intarnat-ka / Macluumaadka farsamo
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 11 1 2022
Meeshan waxa ka heleysaa warbixin ku saabsan booggan internetka siduu u qorsheeysan yahay iyo nidaamkiisa markii laga fiiriyo dhinaca sancadka.
Boggan waa mid nugul. Tani micnaheedu waa inuu isku haboonaysiiyo weynaanta iyo araga iyadoo ku xiran kolba inta ay leegtahay shaashadaadu. Tusaale ahaan waxay leedahay aragti kale dhanka telafoonka moobilka marka la bar-bardhigo ta ay ku leedahay kombiyuutar.
Borograamka akhriya bogga internetka
Cabbiraada qoralka iyo sidaa u weeyneyn kartid
Adiga waa badalikarta cabbiraada qoralka oo booggan hadii aad batoonka ey ku qorantahay Ctrl, aad ka heleysid teebka kombiyuutarka, aad riixdid iyo isla markaasna "+" (weeyney) ama "-" (yarey), hadii kale riixdid Ctrl iyo kan gacanta lagu haayo meesha waregsaneyso kore ama hose u wadid.
Borograamada akhriya bogga internetka qarkood weey leeyihiin in ey kuu weyneeyaan cabbiraada qoralka, laakin markaas boosaska kale iyo sawirada cabbiradooda waxbo ma iska badalaayaan, oo ma ahan sida markaa boogga oo dhan ku soo dhawyn.
Bogaga ku yaala Informationsverige.se waxaa lagu akrhin kara adeega akhriska.